Platanovaya गली (सोची) रिसोर्ट शहर को सबै भन्दा दिलचस्प पर्यटक आकर्षण मध्ये एक छ। यो एक ठूलो पैदल यात्री सडक हो जुन ठूलो राजनैतिक भागको भाग हो। यसलाई स्पा भनिन्छ। यो प्राचीन विमान रूखहरू संग लामबद्ध छन्। त्यहाँ पनि प्रसिद्ध गायन फव्वारेहरू छन्।
Platanovaya एली कसरि (सोची)
यो जान्दछ कि पूर्वमा यो रूख, जो चिनिरा भनिन्छ, एक प्रतीकात्मक भूमिका खेल्दछ। यसको अर्थ दीर्घकालीन र सफलता हो। एक मुस्लिम किंवदंतियों मध्ये एक बताउँछ कि एक शहर मा एक विमान को पेड थियो, जो एक हजार वर्ष पुराना भयो। अनि एक दिन एक भूकम्प त्यहाँ भयो। चिन्तित इमरले यदि स्थानीय विमानस्थललाई सोधे भने विमानस्थलको रूख जोडिएको थियो। तिनीहरूले त्यसो जवाफ दिए, तर विनाशले अल्लाहको घरलाई नष्ट गर्यो (मस्जिद)। अमीमले बताए कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विमान पार्कको पेटी हो, किनभने कुनै भवन पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। अनि यस्तो प्राचीन विमानको रूख आफैलाई अल्लाह द्वारा पुनरुत्थान गर्न सकिँदैन। एक पटक, उन्नीसवीं शताब्दीमा, यो स्थानहरू एक चपलर गलीमा परेका थिए। तर यो रूखमा काटिएको थियो कि रूखहरू टेलीफोन तार तारिखमा हस्तक्षेप गर्छन्। मानिसहरूले यसलाई रिसाउन थाले। अनि अब सोचीको शहर प्रमुख बीसौं शताब्दीमा सिजनको रूखले त्यसपछि हस्तशिल्प लेनको साथ तय गर्ने निर्णय गर्यो। यो जिमनाशियम सेना द्वारा गरियो। Platanovaya गली (सोची) एक हजार नौ सय र तौलह वर्षको वसन्तमा खोलिएको थियो, र यो घटना रोमनभ राजको तीन सौ साता वर्षमा समर्पित थियो।
बाहिरी स्थानबाट बाकी स्थान बाट
यो ल्यान्डमार्कले धेरै ठूला ऐतिहासिक घटनाहरूको अनुभव गरेको छ। जब जोसफ स्टललिनको अन्तर्गत शहर पुनर्निर्माण गरिएको थियो, गली रक्षा गरिएको थियो। अन्तिम शताब्दीका पातहरूमा, यो कुरुर्नी प्रोस्स्पेक को पुनरुत्थान गर्ने निर्णय भयो, यसलाई ठूलो राजमार्गमा परिणत गर्यो। सबै परियोजनाहरू परियोजनामा थिएनन्। तर वास्तुकार मेटलेभले यसलाई सडकको भागको रूपमा राख्ने काम गरे। यो दिलचस्प छ कि समय देखि समय मा वहाँ डे डे प्रदर्शन को आयोजन गरियो र यहां सम्म कि सरकारी रोडम्स स्थापित भयो। सत्तरमा, ठूलो कुर्नीनी प्रोस्पेक्ट पुन: मरम्मत गरिएको थियो, र फुटपाथ सुन्दर रंगीन टाइलको साथ राखिएको थियो, जस्तै रियो डी जनेरियो मा बेलौर्ड। Platanovaya गली (सोची) परिदृश्य कला को एक स्मारक को आधिकारिक स्थिति प्राप्त गर्यो। त्यसपछि त्यसपछि गलीलाई मनोरञ्जन मनोरञ्जन क्षेत्रमा बदल्न निर्णय गरियो। अर्मेनियाई इन्जिनियर्सहरूले गायन फाउन्टेनहरूको प्रोजेक्टलाई विकास गरे, त्यसपछि त्यसपछि फैशनेबल भए। तिनीहरूले येरेवनमा जटिल निर्माण जस्तो केहि चीज सिर्जना गर्ने निर्णय गरे, जुन कार्यान्वयन गरिएको थियो।
इतिहासको कालो र सेतो धार
तर मल मा खराब समयहरू थिए। त्यसोभए, 1 993मा, ताप्लेजुङमा राखिएको थियो जब केही पेडहरूको जड नष्ट भयो, र नयाँ बिरुवाहरू रोपिएको थियो। धेरै पटक हवाई पेडहरू आँसु र हरिकोन्सबाट पीडित थिए। र अर्को दस वर्ष पछि तिनीहरूले पत्ता लगाए कि धेरै रूखहरू कवकले प्रभावित हुन्छन् र मानिसहरू हिंड्ने गर्दछन्। त्यसकारण, झारखाना रूसको जिम्मासियम द्वारा लगाएका धेरैवटा पेडहरू पेटीहरू त्यहाँ छैनन्। तर वैसे पनि, प्लटनोया गली (सोची), जसको तस्वीर तपाई दृष्टान्तको रूपमा देख्नुहुन्छ, एक स्थानमा रहेको छ जहाँ स्थानीय मानिसहरू जाने र धेरै छुट्ट्याउने व्यक्तिहरू जुन छुट्टीमा यहाँ आउछन्।
त्यहाँ कसरी पुग्न
अब हामी शहरको वरपर हिड्न निर्णय गर्ने व्यक्तिको बारेमा कुरा गरौं, त्यहाँ एक स्थलचिन्ह कहाँ जानुहोस्, प्लान्टोनोया गली (सोची) को रूपमा। यसको आधिकारिक ठेगाना Kurortny Prospekt हो। यो आश्चर्यजनक छैन, किनभने, फेरि, यो पैदल यात्री सडक ठूलो राजमार्गको भाग हो। तपाईं यहाँ बस वा शटल बसबाट आउन सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक यातायात संख्या संख्या उन्नीसिन, चौथो र पच्चीस वर्षमा रोकिएको छ। गली र यस्तो मिनिबसहरू जुन 100, 104, 105 र 120 सम्म पास पारिएको छ। वैसे पनि, यो बाहिर निस्किने मात्र हो: "रोक्नुहोस्" विमान एली। " सोची आफ्नो ट्राभल रजस्टरमा यस्तो नाम छैन। वास्तवमा, स्टप "गाउ" गाउ "भनिन्छ। यो ल्यान्डमार्क शहर वरिपरी धेरै दर्शनशीलता भ्रमणको दौडान भ्रमण गरिएको छ। र अर्को ढोका विभिन्न मूल्य कोटीहरूको हस्टल र अपार्टमेन्ट हुन्।
विवरण र समीक्षाहरू
अब गलीको लम्बाई लगभग दुई सय पचास मीटर छ। त्यस समयमा साठ विमान पेडहरू लगाए। उनीहरूको बाहेक, एवरेज पनि laurel चेरी, boxwood, हथेलियों संग सजाया गएको छ। मानिसहरु प्रायः "शर्महीन" भनिन्छ। तथ्य यो छ कि तिनीहरू छाला फेंकन्छन्, जस्तो निक्कै देखिन्छ। सबैभन्दा पुरानो विमान पेड सय सय भन्दा बढी उमेर हो, र तिनीहरूका व्यास एक र आधा मीटर भन्दा बढी हुन्छ। एस्प्लायडले तटस्थता संग पार्क जोड्दछ। माईल जस्तो ठूला पातहरु र फलहरु संग टेनिस बल संग यिनी पेडहरु को आकार र सुन्दरता पर्यटकहरु को लागि प्रभावशाली हुन्छन्। तिनीहरू लेख्छन् कि विमानको रूखहरू बीचको हिँडाइ धेरै रमाइलो हुन्छ, आनन्दित र सुखद विचार र सपनाहरूको नेतृत्व गर्दछ। नजिकैको धेरै पसल र क्याफेहरू छन्। भित्ताहरू यहाँ गर्मीमा हिँड्न मन पराउँछन्, तर गलीमा जंगलमा धेरै भीड छ।
यो सजावटी संरचना युगमा एक प्रकारको स्मारक हो। बस राख्नुहोस्, तिनीहरू एक पूल हो जहाँ पानी जेटहरू दबाबमा उडिरहेका छन्। त्यहाँ एक विशेष प्रकाश र संगीत उपकरण छ। धेरै पानीकोट र टेक्नोलोजी यन्त्रहरू यसले स्ट्रीमलाई गाउन र नृत्य गर्न सम्भव बनाउँछ। यसको अतिरिक्त, फव्वारे विशेष प्रकाश प्रभावहरु संग सुसज्जित छ। तिनीहरू ट्रेड ग्यालेरीको व्यवस्थाको समयमा बनाइएका थिए। दुई हजार र नौं वर्षमा फव्वारेहरू पुनर्निर्माण गरियो, सुन्दर मोजाइक्ससँग सजाय गरियो। अब तिनीहरू एक संरचना को प्रतिनिधित्व गर्दछ निकटतम रेस्टुरेन्ट "चावल" संग। ठेगाना आकर्षण: गायन फव्वारे, सोची, प्लटनोयाया गली। तिनीहरू गर्मीको तालिका हो, तिनीहरू न केवल सिजनमा काम गर्छन् तर पनि शामहरूमा, जब सबैभन्दा राम्रो प्रकाश संगीत प्रभाव प्राप्त हुन्छ।
पार्क "काल्पनिक", कला। एम "मारिनो"। "काल्पनिक पार्क" - मार्लिनोमा मनोरञ्जन केन्द्र: वर्णन, विशेषताहरू, मनोरञ्जन र समीक्षाहरू
मस्को: लिन्न्ग्रादस्की रेलवे स्टेशन। त्यहाँ कहां छ र त्यहाँ कसरी पुग्नुहुन्छ?
मिनेसोटा राज्य (यूएसए): रोचक तथ्यहरू
सेंट सेन्ट पीटर्सबर्ग को 300 औं सालगिरह को पार्क: फोटो, साइट
म पार्किङ ब्रेक कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ
पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु को पर्यावरण शिक्षा
कहिले र कसरी धेरै जन्म दिने अघि पेट पतन?
Violets: घर, वर्णन, प्रजनन, मल, टीन मा हेरविचार
"7 दिन7किलो" - एक हप्ताको लागि एक आहार: को फाइदा र बेफाइदा, समीक्षा
Motherboard एसस P5Q प्रो टर्बो: समीक्षा, सुविधा र समीक्षा